Iikhosi ze-10 zeGeotechnical zobunjineli kwi-Intanethi kwi-2022
Iikhosi ezili-10 eziphezulu ze-Geotechnical Engineering Courses
Ungabhalisa nakweyiphi na iikhosi ze-geotechnical zobunjineli kwi-Intanethi ukulandela ikhondo elitsha lomsebenzi, ukuxubha kwizakhono esele zikho, okanye ukunyuka kwinqanaba lokufunda. Iikhosi ezidweliswe kweli nqaku zinikezelwa nge-100% kwi-intanethi kwaye zinokuza simahla okanye zihlawulwe, ezibonisiweyo kwiinkcukacha zekhosi nganye.
1 Yintoni ubunjineli beGeotechnical?
2 Zenza ntoni iinjineli zeGeotechnical?
3 Ndingaba yinjineli ye-geotechnical?
4 Ngaba ndingafunda izifundo zobunjineli be-geotechnical kwi-Intanethi?
5 Ngaba ubunjineli begeotechnical bunzima?
6 Iikhosi eziphezulu ze-Geotechnical Engineering kwi-Intanethi
6.1 1. Ubunjineli beSiseko seGeotechnical II
6.2 2. Ubunjineli boMhlaba
6.3 Ithiyori zoxinzelelo lomhlaba (Ikhosi yabaQalayo)
6.4 4. Ubunjineli boqobo beGeotechnical
6.5 5.Ithiyori zoXinzelelo loMhlaba (Ikhosi yeengcali)
6.6 6. Ingcali, iBachelor's, i-Master's, uGqirha-i-Geotechnical Engineering
6.7 7. Ijiyoloji kunye neJojijiji yobunjineli
6.8 8. Izinto ezisisiseko kubuNjineli beGeotechnical
6.9 9. Uhlalutyo lwamanani lweGeotechnical
6.10 10. Iziseko zoyilo lobunjineli beGeotechnical
6.12 I ngcebiso
Yintoni ubunjineli beGeotechnical?
Ubunjineli beGeotechnical lisebe lobunjineli obujongana nokuziphatha kobunjineli bezinto zomhlaba. Indawo yokufunda idibanisa imigaqo kunye neendlela zoomatshini bomhlaba kwisisombululo semicimbi yobunjineli kunye noyilo lwemisebenzi yobunjineli.
Abantu abaninzi abalivanga okanye abalazi ngeli sebe lobunjineli, kulungile, yinto elungileyo oyifundayo ngoku. Eli nqaku lisikhanyisela ukuba yintoni injineli ye-geotechnical, ungayifunda njani kwi-intanethi, kwaye uqalise neeklasi kwakamsinya nje ukuba unikwe ithuba.
Ubunjineli beGeotechnical kunye nobunjineli basebenza ngokubambisana. Injineli yaseburhulumenteni ayinakuwuqala umsebenzi wayo ngaphandle kwenjineli ye-geotechnical kwiqela. Masifunde ukuba benza ntoni aba bantu.
Zenza ntoni iinjineli zeGeotechnical?
Umsebenzi weenjineli ze-geotechnical kukuphanda kunye nokufunda umhlaba ukuze uqiniseke ukuba kufanelekile ukubeka iziseko zokwakha. Oku kubandakanya ukuphanda nokuvavanya iisayithi zokwakha, ukwenza uyilo lolwakhiwo, ukongamela ulwakhiwo, kunye nokubhala nokunikezela iingxelo.
Uyazi ukuqonda okwenziwa ziinjineli ze-geotechnical kunye nendima ebalulekileyo abayidlalayo kwicandelo lokwakha kunye nobunjineli boluntu xa lulonke.
Ukuba unesidanga sokubamba injineli yoluntu enokuba isidanga senkosi okanye isidanga sakho uya kulifumana eli nqaku libalulekile ekukhuleni kwakho kwikhondo lomsebenzi. Ngolwazi kweli sebe likhethekileyo lobunjineli, uya kuma ngaphezulu koogxa bakho, ukwazi ukukhokela iqela, kwaye ube nethuba lokunyusa umbutho wakho ngaloo ndlela unyusa umvuzo.
Ukuba ukwelinye isebe lobunjineli unokufumana ukuba esi sithuba siluncedo, akukho monakalo ekufumaneni ulwazi ngaphandle kwendawo yakho yokufunda. Ulwazi oluninzi onalo, kokukhona uya kunyanzeleka ukuba uhambe.
Ke, nokuba awukho nakweyiphi na yecandelo lobunjineli ungabhalisa ngokulinganayo kwezi zifundo zidweliswe apha ukufumana umbono, ulwazi malunga neenjineli ze-geotechnical ezenzayo kunye nokuba zikabani. Inokonyusa isimilo sakho ekufumaneni ikhondo lomsebenzi ebaleni, sisakhono esifunwa kakhulu emva kwayo yonke loo nto kwaye ubeka ixabiso ngakumbi kuwe.
Unomdla wokuba yinjineli ye-geotechnical? Nantsi indlela onokuthi uqhubeke ngayo.
Ndingaba yinjineli ye-geotechnical?
Ngoku ukuba ubonakalise umdla wokuba yinjineli ye-geotechnical, unokuba ngomnye ngokufumana isidanga se-bachelor kwi-civil, geotechnical, geological, okanye kwinkqubo yobunjineli yendalo esingqongileyo. Unokufuna ukufumana isidanga esiphambili kubunjineli be-geotechnical njengoko uninzi lwabaqeshi lukhetha abaviwa.
Kwakhona, isidanga esiphambili njengenkosi sigxila kuphela kubunjineli be-geotechnical xa usiya kuyo. Kuthatha unyaka omnye ukuya kwemibini yokufunda ukuze ufumane inkosi kodwa kuya kuphononongwa nzulu kokufundwayo kunye nethiyori yezifundo kwaye kukwenze ube ngcono ngakumbi kunesidanga se-bachelor's holder.
Ngaba ndingafunda izifundo zobunjineli be-geotechnical kwi-Intanethi?
Unokufunda iintlobo ngeentlobo zeekhosi zobunjineli be-geotechnical ezikwi-Intanethi ezibonelelwa ziiyunivesithi eziphambili kunye neekholeji ezivela kwihlabathi liphela, ezisimahla nezihlawulelwayo.
Nangona kunjalo, ezi zifundo zikunika ulwazi olusisiseko kunye nesakhono esifanelekileyo kubafundi "abavavanya amanzi" ngaphambi kokuba bafunde eyona nto iphambili. Okanye kwabo sele benesidanga sokubamba iinjineli zoluntu kwaye bafuna ukuphucula izakhono zabo kunye nolwazi kubunjineli be-geotechnical.
Ewe! Unokufunda ubunjineli be-geotechnical kwi-intanethi kodwa kungcono ufumane isidanga onokuthi usifumane kwi-Intanethi okanye kwiziko eliqhelekileyo eliqhelekileyo.
Ngaba ubunjineli begeotechnical bunzima?
Ngokweemvavanyo esizifumene kwiindawo ezahlukeneyo, malunga neepesenti ezingama-75 zabafundi bezobunjineli be-geotechnical bathi ayisiyondawo inzima kodwa izele lulonwabo. Ipesenti eseleyo ithi inzima kwaye ayinakulinganiswa.
Ukuba uyakuthanda ngokwenene ukufunda ubunjineli be-geotechnical, akukho ndlela iya kuba nzima kuwe.
Kuba awunakufikelela ekufumaneni isidanga ungaqala ngezifundo zobunjineli eziphezulu ze-geotechnical kwi-intanethi kunye nokuqalisa umdlalo wakho wobunjineli.
Iikhosi eziphezulu ze-Geotechnical Engineering kwi-Intanethi
Apha ngezantsi kukho iikhosi eziphezulu ze-10 ze-geotechnical zobunjineli kwi-intanethi, ezikhethwe ngokukodwa sithi Funda kwelinye ilizwe iZizwe ukuze zilungele umdla wakho.
Ubunjineli beSiseko seGeotechnical II
Ithiyori zoxinzelelo loMhlaba (Ikhosi yabaQalayo)
Ubunjineli obuSisiseko beGeotechnical
Ithiyori zoxinzelelo loMhlaba (ikhosi yeengcali)
Ingcali, i-Bachelor's, i-Master's, uGqirha-i-Geotechnical Engineering
I-Geology kunye nobunjineli beGeology
Izinto ezisisiseko kubuNjineli beGeotechnical
Uhlalutyo lwamanani lweGeotechnical
Isiseko soYilo lweNjineli yeGeotechnical
1. Ubunjineli beSiseko seGeotechnical II
Iziko lase-India leTekhnoloji libonelela ngezi zifundo zobunjineli ze-geotechnical online kwinqanaba lesidanga sokuqala. Le khosi yenzelwe abafundi bezenjineli zobunjineli kwinqanaba lesidanga sokuqala, kodwa nabani na ngaphandle kwale mfuneko angabhalisa ngokulinganayo.
Le khosi ayihlawulelwa kwaye ithatha iiveki ezili-12 ukuyigqiba kwaye kukho nesatifikethi osifumanayo onokufumana umrhumo omncinci. Le khosi ithatha abafundi ngothotho lwezihloko ezibalulekileyo zobunjineli be-geotechnical ezinjengokunxibelelana kobume bomhlaba, ubunjineli obusisiseko, kunye nokunye.
Ikhosi yi-100% kwi-intanethi kwaye ifundiswa ngolwimi lwesiNgesi.
2. Iiteknoloji zoMhlaba
Ubuchwephesha bomhlaba yindawo ebalulekileyo yoxinzelelo kubantu abafuna ukuba ziinjineli ze-geotechnical. Ngolwazi, uya kuba ngcono ngakumbi kubunjineli bendawo, njengoko uzakufunda uhlalutyo lobungakanani bamasuntswana, iipropathi zesalathiso somhlaba, ukuhlelwa komhlaba, ukuxinana komhlaba, kunye nabanye.
Ikhosi inikezelwa kwi-Intanethi ngu-Udemy kwaye ixabisa malunga ne- $ 130 kwaye iza nesatifikethi sokugqitywa onokuthi usincamathisele kwi-CV yakho esele ikho.
3. Ithiyori zoxinzelelo loMhlaba (Ikhosi yabaQalayo)
Le yikhosi yakho ukuba unolwazi olunzulu ngobunjineli be-geotechnical kwaye ufuna ukuqala ikhondo lomsebenzi ebaleni. Ikwayikhosi efanelekileyo yeenjineli kunye neetekhnoloji zobunjineli ezisebenza njengeekhontraktha okanye abacebisi.
Ukuba usaqala, ukuthatha le khosi ikunike into efunekayo ukuze uthathe ikhosi yeengcali. Ithiyori yoxinzelelo loMhlaba yenye yeekhosi zobunjineli be-geotechnical kwi-Intanethi kwaye inikezelwa yi-Udemy ngentlawulo ethe tyaba ye- $ 100.
4. Ubunjineli obuSisiseko beGeotechnical
Ukuphucula izakhono zobunjineli ngokubhalisa kule khosi, uya kuba ufunda ngeendlela ezahlukeneyo ezibalulekileyo kwikhondo lakho lobunjineli okanye injineli ye-geotechnical. Izihloko eziza kunyangwa zibandakanya iindlela zokubala indawo yokuhlala, iintlobo zoxinzelelo lomhlaba kunye nokubala kwabo, iimfumba kunye neshafti yokuhamba, kunye nokunye.
Le khosi ayihlawulelwa, abafundi abanomdla bayacelwa ukuba bahlawule imali eyi- $ 168 eza nesatifikethi sokugqitywa.
5. Ithiyori zoxinzelelo loMhlaba (ikhosi yeengcali)
Le yikhosi ebanzi yethiyori yoxinzelelo lomhlaba, abafundi abagqibe ikhosi yabasaqalayo bangaqhubeka babhalise kule ukuze bafumane ulwazi olunzulu ngakumbi lweethiyori zoxinzelelo lomhlaba.
Le khosi yeengcali inikezela ngendlela esebenzayo xa kuthelekiswa nezifundo zokuqala. Uya kufumana ukuqonda kumagama ahlukeneyo, iindlela kunye nokufunda ukusombulula iingxaki ezahlukeneyo ohlangane nenjineli ye-geotechnical ebaleni.
Ikhosi ixabisa malunga ne- $ 130, iza nesatifikethi sokugqitywa kwaye uza kufunda ngesantya sakho.
6. Ingcali, i-Bachelor's, i-Master's, uGqirha-i-Geotechnical Engineering
Ndikhankanyile kwinxalenye yokuqala yeli nqaku ukuba ungafumana isidanga sokwenyani, i-bachelor's, i-master's, okanye i-doctorate, yobunjineli be-geotechnical online ngaphandle kwesidingo sokuya kwiklasi yesiko lesiqhelo. Emva kokumba okuninzi, sakwazi ukuyifumana.
Le khosi ibonelelwa nge-Intanethi yi-Bircham International University kwaye ihanjiswa kwi-Intanethi yiplatifomu yokufunda eyunivesithi. Ungabhalisela ingcali, i-bachelor, i-masters, okanye iidigri zobugqirha kwaye ufumane izakhono zobunjineli be-geotechnical kwenye yeeyunivesithi eziphambili emhlabeni.
Inkqubo yamkela abafundi abavela kuzo zonke iindawo zehlabathi, abafundi abanomdla kuya kufuneka benze isicelo sokwamkelwa kwiziko ukuze babhalise kwinkqubo abayithandayo.
7. I-Geology kunye nobunjineli beGeology
Awunakho ukuba yinjineli egcweleyo yoluntu okanye injineli ye-geotechnical ngaphandle kolwazi lwejoloji kunye nobunjineli bejoloji. Yindawo ebalulekileyo yokufunda ukugqwesa njengenjineli ye-geotechnical kwaye ukubhalisa kule khosi kuya kukunika ulwazi kunye nesakhono esifunekayo ukuqala ikhondo kwicandelo lokwakha.
Kule khosi, abafundi baya kukhangela iindlela zokukhusela nokusebenzisa izixhobo zomhlaba ngoku nakwixesha elizayo, bafumane izakhono kuphando lwejoloji kwaye bafunde iindlela nobuchule obuchaphazelekayo. Le khosi yenye yeekhosi zobunjineli be-geotechnical ezinikezelwa yiYunivesithi yaseTsinghua kwaye zisiwe kwi-Intanethi yi-edX.
Le khosi ifundiswa kulwimi lwesiNgesi, simahla kodwa iza nesatifikethi esihlawulelweyo ngentlawulo ye- $ 139.
8. Izinto ezisisiseko kubuNjineli beGeotechnical
Le khosi yeyabafundi abanemvelaphi yobunjineli boluntu nokuba kukwinqanaba lesidanga sokuqala okanye kwinqanaba lesidanga sokuqala. Icacisa zonke izinto ezisisiseko ekufuneka umntu ezazi kubuchwephesha bomhlaba, ukwenziwa komhlaba, i-mineralogy yodongwe, kunye nobume bomhlaba.
Le yikhosi yakho ukuba awunalo ulwazi lobunjineli be-geotechnical okanye ufuna ukuphucula ipotifoliyo yakho yolwazi. Ikhosi ithengiswa nge- $ 20 kwaye iza nesatifikethi sokugqitywa.
9. Uhlalutyo lwamanani lweGeotechnical
Uhlalutyo lwamanani lubalulekile kulwakhiwo lwesiza kwaye ube yinjineli yegeotechnical engcono izakhono zakho zohlalutyo lwamanani e-geotechnical kufuneka zibalasele. Bhalisa kule khosi ukuze ufunde indlela yokwenza ngcono kuhlalutyo lwamanani ukunceda umsebenzi wakho njengonjineli we-geotechnical ube ngcono.
Le khosi yi-100% kwi-intanethi kwaye isimahla kodwa uya kufunda ngeendlela ezahlukeneyo zokuqonda kunye nokuqonda kubandakanya indlela yokuseka amabakala okuqala kunye namanqanaba okwakha, khetha iimodeli ezifanelekileyo kunye neeparameter zokulinganisa indlela yokuziphatha komhlaba, nokunye.
10. Isiseko soYilo lweNjineli yeGeotechnical
Iinjineli zeGeotechnical ziyabandakanyeka kuyilo loyilo kwaye kuba ufuna ukuqala ikhondo lomsebenzi ebaleni, kubaluleke kakhulu ukuba ukufunde. Usebenzisa iimfundiso ezisebenzayo, uya kufunda indlela yokuyila iziseko zeemfumba, imfumba yeemfumba, iimfumba zamaphepha, kunye nokunye.
Le khosi yenye yeekhosi zobunjineli be-geotechnical ezinikezelwa yi-Udemy kwaye ihlawulisa ireyithi ethe tyaba ye- $ 40. Kuza nesatifikethi sokugqitywa onokuthi usincamathisele kwi-CV yakho okanye kwi-Resume.
Ezi zezi zifundo zobunjineli be-geotechnical online kwaye ziyafumaneka ukuze ubhalise nanini na ukulungele.
Ezi zifundo zobunjineli ze-geotechnical ezikwi-Intanethi ziyilelwe ukukuxhobisa ngolwazi olungcono ukuba sele ungunjineli woluntu, izakhono oza kuba nazo ziya kukusa kude kolu shishino. Kwaye ukuba ufuna ukufumana isidanga se-master kwinjineli ye-geotechnical, ezi zifundo ziyindlela elungileyo yokuqala.
Ngolwazi olusisiseko ebaleni ekufuneka ulufumene kwezi zifundo zidweliswe apha, ukwenza ikhosi akuyi kuba nzima xa ekugqibeleni uyifunda ngokusisigxina. Ungaqala ngezifundo zasimahla kwaye usebenze ngendlela yakho yokubhalisela abo bahlawulelweyo kwaye uye kwinkqubo yesidanga.
Kuba ezi zifundo zifundiswa kwi-Intanethi, awuzukuba naxhala ngoxinzelelo kunye nexesha elingafanelekanga. Ezi zifundo ziyaguquguquka, ziyilelwe ukulungelelanisa ishedyuli yakho nokuba wenza ntoni kwaye oko kwenza ukuba ukufunda kungabi luxinzelelo kwaye kube lula.
Uluhlu lweMisebenzi yexeshana yexeshana yabafundi beekholeji
IiDyunivesithi eziSimahla zokuFunda eCanada
Iikhosi ze-20 zasimahla zeKholeji zeKhredithi
I-12 yeeDigri zeNkonzo eziSimahla kwi-Intanethi
funda kwi-intanethi izifundo zekhompyutha
Iikhosi zobunjineli be-geotechnical kwi-intanethi
Post Previous:Iiyunivesithi zaseOntario Canada zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Okulandelayo Post:Iikhosi ezili-13 zoQeqesho kwi-Intanethi zaBafundi kunye naBasebenzi